Wararka - Laydhka Howlgalka ee saqafka laguma dhejin karo Qol AMA Dherer Dhererkiisu hooseeyo?
Sannado badan oo iib iyo khibrad wax soo saar ah, waxaan ogaanay in macaamiisha qaarkood ay aad u jahwareersan yihiin markay wax iibsanayaan Iftiinka shaqeeya.
Wixii ah nalka saqafka ka shaqeeya, dhererkeeda rakibidda ugu habboon waa 2.9 mitir. Laakiin Jabbaan, Thailand, Ecuador, ama qaar ka mid ah dalalka Afrika, tiyaatarada ay ku shaqeeyaan guud ahaan way ka hooseeyaan 2.9 mitir dherer ahaan. Ma yeeli karaan saqafIftiinka shaqeeya?
Halkan waxaan u baahannahay inaan ku faafinno su'aasha ku saabsan dhererka rakibidda, waana inaan la xaqiijinnaa macmiilka ka hor intaanan dalban amar. Waxa loogu yeero dhererka rakibidda, taasi waa, dhererka dabaqa, waxaa loola jeedaa dhererka laga bilaabo saqafka qurxinta ee dhulka, ma aha dhererka saqafka ilaa dhulka. Dabcan, wali waxaa jira qolal qalliin oo aan lahayn saqafkan qurxinta. Qolka qalliinka noocan ah, dhererkiisa rakibidu waa masaafada u jirta saqafka ilaa dhulka.
Markale dib ugu laabo mawduuca, xalal noocee ah ayaan haysanaa annagoo ah alaab-qeybiye xirfadle ah oo shaqeynaya 20 sano. Fadlan hubi nidaamka iibka ee u dhexeeya aniga iyo macaamiishayda cusub ee Ecuador.
Macaamiilku wuxuu u iibsanayaa nal laba-madax leh oo shaqeeya oo loogu talagalay rugta caafimaadka xoolaha. Kahor intaanan amarka bixin, waxaan ubaahanahay inuu isagu bixiyo dhererka rakibida. Sawirka hoose waa habka cabirka dhererka uu dib u diray.
Ugu dambeyntii waxaa la xaqiijiyay in dhererka dabaqa uu yahay kaliya 2.6 mitir, taas oo aan la kulmin heerka dhererka looga baahan yahay ee mitirka 2.9.
Ka dib markaan tixgelinay dhererka guud ee dhakhaatiirta iyo kor u qaadista miiska qalliinka, waxaan go'aansanay inaan qaadano qorshe rakib ah oo loogu talagalay.
Waxaan dib u naqshadeynay laambadda haysata oo waxaan u sameynay sawirro macaamiisha si ay u xaqiijiyaan. Macmiilku wuu oggol yahay qorshaheena naqshadeynta.
Kadib helitaanka badeecada oo aad isticmaasho mudo, macaamilku aad buu u qanacsan yahay.
Goor dambe, isagoo booqanaya qolkiisa cusub ee qalliinka, ayaa saaxiibkiis takhtarka wuxuu dib u hagaajiyay Laydh laba-madax leh Iftiinka shaqeeya.
Halkan, waxaan si kal iyo laab ah ugu mahadnaqayaa dhakhtarka xoolaha oo ka caawiyey inuu ii soo gudbiyo. Waa inay noqotaa alaabteena la isku halleyn karo iyo tixgelinta adeegga iibka ka dib dhaqaajisay dhakhaatiirta.
Iyadoo loo marayo kiiskan isgaarsiinta, waxaan ognahay in qolka qalliinka oo dhererkiisu yahay 2.6m uu wali leeyahay shuruudaha lagu rakibo saqafka Iftiinka shaqeeya.
Laakiin waxaa jira kiisas badan oo dheeri ah, sida dhererka qolka qalliinka oo keliya qiyaastii 2.4m, kiiskan, waxaan kula talinaynaa macaamiisha inay isticmaalaan nooca derbiga Iftiinka shaqeeya ama mobilka Iftiinka shaqeeya.
Hoos waxaan sidoo kale ku haynaa sawirro rakibid ah oo tixraac ah.
Laga soo bilaabo xilligii halogen OT light ilaa LED OT light, shirkadeena waxay leedahay ku dhowaad 20 sano oo khibrad ah qaabeynta, soo saarista iyo rakibida nalalka qalliinka ee gudaha iyo dibedda.
Sidaa darteed, macmiil ahaan, haddii aad wax su'aalo ah ka qabto waxyaabaha ku saabsan Iftiinka shaqeeya, waad nagala tashan kartaa bogga baaritaanka, waan ku faraxsanahay inaan xallinno.
Xitaa haddii uusan jirin heshiis, khibraddan isgaarsiineed ee qiimaha leh waxay naga caawin kartaa inaan qorshe wanaagsan u dejino geedi socodka iibka mustaqbalka.